चुल्ठो काटिने घटनाले आतङ्क नै मच्चायो, भारतका ५० जनापछि नेपालका १५ जना बने पिडित, खास के हो यो समस्या ? – Etajakhabar
चुल्ठो काटिने घटनाले आतङ्क नै मच्चायो, भारतका ५० जनापछि नेपालका १५ जना बने पिडित, खास के हो यो समस्या ?
काठमाडौं । रूपन्देही र कपिलवस्तुमा युवतीको चुल्ठो काटिएका घटना बढ्दै गएका छन् । भारतमा यस्ता घटनाका कारण युवती आतङ्कित छन् ।
रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाकी ३५ वर्षीया सुनिता (परिवर्तित नाम)को चुल्ठो बिहीबार बिहान काटिएको छ । सोही नगरपालिकाकी अर्की ३२ वर्षीया युवतीको टाउको पछाडिको भागमा केही भागको कपाल पूरै काटिएको थियो । यस्तो घटनाबाट रूपन्देहीमा १५ जनाभन्दा बढी महिला पीडित बनेका छन् ।
रूपन्देहीमा मात्रै नभई कपिलवस्तुमा पनि यस्ता घटना बढ्दै गएका छन् । उनीहरूको कपाल कैँचीले काटिएको जस्तो देखिन्छ । तर, कसरी र कसले काटिदियो भन्ने खुलेको छैन । कपाल काटिएको देखेपछि बेहोश भएकी सुनिताले भैरहवाको भीम अस्पतालमा भनिन्, ‘केही समय टाउको झमझमाएजस्तो भयो । त्यति बेला न्याउरी मुसो आएको जस्तो लाग्छ । एकै छिनमा रिँगटा लाग्यो । पछि होश आउँदा त कपालको चुल्ठो नै काटिएको रहेछ ।’ उनका अनुसार बेहोश हुनुअघिसम्म चुल्ठो काटिएको थिएन । त्यसपछि कसले काटिदियो, उनले ठम्याउन सकिनन् ।
भीम अस्पतालमा आएका घटनामध्ये पहाडी मूलकी महिला एकजनामात्रै आएको बताइएको छ । भारतमा पनि महिलाको कपाल काटिने घटनाले आतङ्क नै मच्चाएको छ । भारतको हरियाणा र राजस्थान राज्यमा ५० जनाभन्दा बढी महिलाको कपाल काटिएको खबर बाहिर आएको छ ।
अहिलेसम्म कपाल काटिएका महिलाको कपाल घरभित्रै काटिएको पाइएको छ । कपाल काटिएर उपचार गर्न आएकामध्ये केही महिला दुईतीन दिनको अन्तरालमा दोहोरिएर आएको चिकित्सकले जनाएका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज शिक्षण अस्पताल भैरहवाका मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. सञ्जीव रञ्जनले मास हिस्टेरिया नामक रोगका कारण यस्ता घटना बाहिर आएको बताउँछन् । चिकित्सकले हाउगुजीको पछि नलागी नडराईकन बस्न पनि सुझाएका छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र १०, २०७४ समय: ९:२३:०१